Donation Box Contribution - Toyota Aye and Sons
You are here: Home1 / Shop2 / News3 / CSR4 / Donation Box Contribution
On the 20th of November, 2021, We as TTAS Staff, have came up with an idea that we would put upaDonation Box at our Customer Lounge, at TTAS HQ. This whole idea started when we did our Kaizen Proposal Program where every member of our company, had to chip in ideas on how to make things better at work and our environment. Setting upaDonation Box was one of the ideas.
Due to Covid 19, we had less traffic than usual. Asaresult , the amount collected was not enough in the donation box .
However,our management of the company had stepped up and contributed money into the donation.
Finally we have raised 1,000,000 Myanmar Kyats which then we donated to Myanmar Red Cross Society (MRCS)
(https://www.redcross.org.mm ) March, 2021.
***Kaizen means “Change for better”, “Continuous Improvement”. The word refers to any improvement, one-time or continuous, large or small, in the same sense as the English word “improvement”. Kaizen aims to eliminate waste and redundancies. Particularly the practices spearheaded by Toyota.
TTAS ရုံးချုပ်ရှိ ဧည့်သည်များနားနေဆောင်တွင် အလှူခံပုံးတစ်ခုထားရှိရန် TTAS ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် နိုဝင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့ တွင် စတင်စီစဉ်ခဲ့ပါသည် ။ ၎င်းအစီအစဉ်သည် ကုမ္ပဏီ၏ ပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်သည့် Kaizen Proposal Program မှ စတင်ရရှိခဲ့သော CSR အစီအစဉ်ကောင်းလေးတစ်ခု ဖြစ်ပါသည် ။
လက်ရှိနိုင်ငံနှင့်တစ်ဝှမ်းဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသော Covid 19 အခြေအနေများကြောင့် လတ်တလော ရုံးတွင် ဧည့်သည်အဝင်အထွက်နည်းပါး၍ မျှော်မှန်းထားသည့် အလှူငွေ ပမဏကို မရရှိခဲ့ပေ ။ သို့သော် ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ဧည့်သည်များ ထည့်ဝင်လှူဒါန်းထား သော အလှူငွေများအပြင် ရည်မှန်းထားသော အလှူငွေပမာဏကို ပြည့်မီရန် အတွက် ကုမ္ပဏီမှလည်း တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ ပါဝင်ဖြည့်တင်းကာ ကျပ် ၁,၀၀၀,၀၀၀ သိန်း တိတိကို မြန်မာကြက်ခြေနီအသင်း( https://www.redcross.org.mm )သို့ ၂၀၂၁ မတ်လ ကုန်တွင် လှူဒါန်းခဲ့ပါသည် ။
***ကုမ္ပဏီမှပြုလုပ်သော “Kaizen” ဆိုသည်မှာ“ ပိုကောင်းအောင်ပြောင်းလဲခြင်း” ၊ “ စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်မှု” ကိုဆိုလိုသည်။
အဆိုပါစကားလုံးသည်အင်္ဂလိပ်စကားလုံး “တိုးတက်မှု” ကဲ့သို့တူညီသောအဓိပ္ပာယ် ရှိသည့် တစ်ကြိမ် သို့မဟုတ် စဉ်ဆက်မပြတ် ၊ ကြီးမားသည်ဖြစ်စေ၊ သေးငယ်သည်ဖြစ်စေ တိုးတက်မှုများကို ရည်ညွှန်းသည်။ Kaizen၏ရည်ရွယ်ချက်သည် အချည်းနှီးဖြစ်စေသော အရာများ နှင့် မလိုအပ်သောအရာများအားဖယ်ရှားပစ်ရန်ဖြစ်သည်။အထူးသဖြင့် Toyota မှ ဦးဆောင်ခဲ့သည့်အလေ့အကျင့်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
(မီငြမ်း : https://en.wikipedia.org/wiki/Kaizen)
TTAS Recruitment video by Ko Jyu Naing Hein CSR with Leithwei Gym (Dream Train Youth Development Home)